Faa'iidooyinka duufaannada | Saadaasha Shabakadda
In kasta oo aan badanaa wax badan laga sheegin, harikeyn Waa astaamo saadaasha hawada oo, run ahaantii, leh laba weji: mid muujineysa xooggeeda wax duminaya, iyo mid kale, oo aynaan dareen badan siinin, kaas oo ah midka ina tusaya dhinac aad uga roon duufaantaan. Xaqiiqdii, mahadaas awgeed, biyuhu waxay gaari karaan meelaha roobabku ku yar yihiin, sida Waqooyiga Carolina (Mareykanka).
Baadi maxay yihiin faa iidooyinka duufaannada.
1 Duufaannada waxay dhaqaajiyaan biyo badan
2 Waxay xakameeyaan heerkulka
3 Waxay gacan ka geystaan ​​daryeelka daryeelka keymaha iyo keymaha kuleylaha ah
4 Sii daa kuleylka
Duufaannada waxay dhaqaajiyaan biyo badan
Kaliya maahan inay keenaan roobab mahiigaan ah, laakiin sidoo kale dabayshu waa ku filan tahay inay ka dhaqaajiso biyaha meel ka mid ah una wareejiso meel kale. Marka sidaas la samaynayo, dareeraha qaaliga ah wuxuu gaari karaa meelaha ay ka jirto yaraanta, si xitaa beeraleydu uga faa’iideystaan.
Waxay xakameeyaan heerkulka
Waxay dejiyaan heerkulka laga bilaabo dhulbaraha ilaa ulaha (Koonfur iyo Xusuusin labadaba), sidaa darteed iyagu waa xakameeyayaasha cimilada dabiiciga ah. Dheeraad ah, gacan ka geysto hoos u dhigidda heerkulka kulaylaha taas oo haddii kale ka saraysa.
Waxay gacan ka geystaan ​​daryeelka daryeelka keymaha iyo keymaha kuleylaha ah
Waana in dhirtani u baahan tahay qoyaan hawo sare leh iyo roobab tiro badan si ay u sii wadaan sii kordhaya. Sidaas, duufaannadu waxay gacan ka geystaan ​​sidii kaymaha roobka iyo kulaylaha cagaaran u noqon lahaayeen, nolol buuxda.
Sidoo kale waa inaad maskaxda ku haysaa taas dabayshu waxay dumisaa kuwa jiran ama geedaha duugoobay, iyagoo u oggolaanaya kuwa kale inay buuxiyaan booskooda.
Sii daa kuleylka
Duufaannadu waxay ka soo bilowdaan badweynta kulaylaha, oo heer kulkeedu sarreeyo (qiyaastii 20-22ºC). Marka cadaadiska jawiga hooseeyo, badda diirran ayaa uumiga ku sii deysa hawada sameynta cusbooneysiin isku beddelaya saacad-gees.
Duufaannada waxaa laga daawan karaa laba aragtiyood oo aad u kala fog. Laakiin, xitaa sidaas oo ay tahay, waa in loo fiirsadaa maadaama ay waxyeello weyn u geysan karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Faa’iidooyinka duufaannada
Maxay Spain uga jirin duufaanno?